Kuwo wonke amazwe emhlabeni esikhathini sethu ngempela athuthukile yokukhiqiza ikhalenda ekhethekile. Idatha ezikuyo, evunywe kaHulumeni. Kuyinto le dokhumenti futhi ulawula ukusebenza izinsuku zonyaka. Bangaki wabo kuzoncika lapho imisebenzi noma lowo muntu, ukuthi umsebenzi wakhe futhi umsebenzi.
Kungani isidingo ifektri ikhalenda
Lowo Mbhalo wangonyaka we ngempela ebalulekile. Ngaphandle-ke nje alikwazi ukuba umsebenzi izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba bezimali kanye ezimali. Lokho ikhalenda ifektri kuyabasiza ukubikezela futhi bahlele imali yabo emholweni abasebenzi yebhizinisi. Yiqiniso, ulwazi oluqukethwe kule dokhumenti izoba wusizo nabasebenzi uqobo. Ikhalenda uyakucabangela ngokuphelele zonke ngezimpelasonto namaholidi. Ukwaziswa okunjalo kuyokusiza ukuba uhlele isikhathi yabo.
Indlela lelungiselelwe kule dokhumenti
Ngakho, ikhalenda ukukhiqizwa - ulwazi umthombo equkethe enokwethenjelwa kakhulu futhi enembile ezindabeni ezifana ngamaholide, ngezimpelasonto lezinsuku zokusebenza onyakeni. Bangaki-ke kubo kuzoncika hhayi kuphela emsebenzini womuntu. Kunoma yimuphi unyaka inikezwe ungathola inombolo ehlukile wabo. Lokhu kungenxa ngokuyinhloko iqiniso lokuthi amaholide ngokuvamile bakhala ngaphansi ngempelasonto. Umehluko omncane, kodwa sisekhona. Ngokwesibonelo, ngo-2012 sasebenza izinsuku 250, futhi ngo-2013 - 247. Ngo inani ethintekile nokuthi yini eqa kulo nyaka noma plain. Ngakho, ikhalenda umsebenzi ikuvumela ukuba njalo ukwaziswa zonke ngamaholide-non-ukusebenza. Ihlanganiswe lencwadi iwusizo ngonyaka. Yenza izinguquko kuyakushiswa unelungelo kuphela kaHulumeni. Ngakho-ke kufanele nje ikhalenda, kodwa futhi ukulandela izimiso ezifanele.
Yimiphi imithetho elawula ukulungiswa ikhalenda
Kanjani izinsuku eziningi ukusebenza kuyobonakala le dokhumenti futhi kungakanani iholide - ulwazi maqondana ngqo nezindinganiso ezibekwe Wobudlelwano Ikhodi WaseRussia. Ngakho, ngaphansi sihloko 112 (ingxenye 2) empambanweni kuqondana usuku nge ngempelasonto wentokozo, ngosuku lokugcina lokusebenza is adluliselwe ku-(kuqala) emva iholidi. Okungukuthi, ngokwesibonelo, uma Mashi 8 luba ngeSonto, iholide ukubeka ngoMsombuluko. Ngaphezu kwalokho, ngaphansi sihloko esifanayo ngaphambi iholide yasemini usike ngehora elilodwa.
Ngokusho izinguquko ezenziwe izihloko wathi kweKhodi 23/04/12, uhulumeni wanikeza ilungelo ukuze uthumele ikhefu lezinsuku ezimbili uNcibijane amaholide ngazo zonke izinsuku zokusebenza ngonyaka (lamanje). Ngokwesibonelo, isinqumo sathathwa ngo-2013. Januwari ngempelasonto kwahambisana amaholide ku Meyi amaholide.
Kukhona ingxenye yesihlanu 112 kwe-athikili, lapho okukhiphayo angadluliselwa nguHulumeni Russian (isiphakamiso esiyisipesheli). umthetho okunjalo kwenza abasebenzi ezimweni ezithile ukusetshenziswa kangcono isikhathi sazo esiningi. Ngokwesibonelo, uma iholidi luba ngeSonto nangoMsombuluko, okukhiphayo angeke sidluliselwe ngoLwesibili futhi ngoLwesihlanu.
Futhi ekulungiseleleni ikhalenda ukukhiqizwa uyakucabangela Article 110 se-Code Labour, owawuthi namahora lokuphumula (ukuqhubeka) akufanele kube ngaphansi kuka-42.
Inani lezinsuku zokusebenza ngonyaka, njengoba kakade kwase kucace umfundi ngokulingana ngqo RF Uhulumeni, kuhlanganisa ikhalenda ukukhiqizwa. Yini kuthandekile nathi 2014? Ngakho, ngokuvumelana le dokhumenti, zemikhosi, futhi ngaleyo ndlela, kulo nyaka izinsuku ezingekho zokusebenza yilezi ezilandelayo:
1 - 6 futhi 8 Januwari - Unyaka omusha;
7/01 - Christmas;
23/02 - Usuku Umdlali wasemuva we wobaba;
8/03 - Mashi 8;
1/05 - Spring Festival;
9/05 - Usuku Ukunqoba phezu eJalimane lobuNazi;
12/06 - Usuku Russia;
4/11 - Usuku Unity.
Ngakho, kulo nyaka saba ukuphumula izinsuku 8 loNyaka Omusha. Lesishiyagalombili-March 3 kuyoba izinsuku ezingekho zokusebenza (8 kuya ku-10). Ngo-May, ukuphumula 4 izinsuku (1 - 4) ngeholide kwentwasahlobo Ukunqoba Day - 3 izinsuku (9 - 11). Futhi izinsuku ezine khulula esiyozithola Novemba (1 kuya 4). Uma senza izibalo ezilula, kuvela ukuthi inani lezinsuku zokusebenza kulo nyaka izoba 247, njengoba ngo-2013 esifushanisiwe njengoba ihora elilodwa - 6. Izinsuku ze-non-ukusebenza, kuhlanganise ngempelasonto, kuyinto 118. Yiqiniso, zonke lezi izibalo zivumelana ukusebenza izinsuku ezinhlanu.
Amazinga isikhathi ukusebenza
Yiqiniso, kufanele wazi hhayi kuphela mayelana nendlela amaholide abaningi baba abasebenzi unyaka ngamunye, kodwa yayihlanganisa nokuthi mangaki amahora angakwazi ukusebenza isikhathi esithile (esiphezulu). nezindaba ezinjalo kulawulwa Article 91 se-Code Labour. Ngokwesibonelo, inani amahora ngesonto ayikwazi ukudlula amane. Kulokhu, umqashi ngamunye (kungakhathaliseki zomthetho) kufanele ngempela acabangele amahora langempela wasebenza ngumsebenzi ngamunye.
Ukuze ufake inombolo ukuncipha amahora
Izinsuku zeviki kungancipha izakhamuzi ezithile. Yiqiniso, futhi kuyadingeka ukwazi konke.
Ukuze abasebenzi ngaphansi kweminyaka eyi-16, inani lama-iri asetjenzweko ngesonto, kufanele yehliswe ngama-10.
Okudala kuka-16 kodwa esingaphansi 18 - 4 amahora.
Abantu abakhubazekile bayoba nomsebenzi ngaphansi ukuze amahora 5.
Ezindaweni ukukhiqizwa ezimweni eziyingozi isonto lomsebenzi okumele sehliselwe 4 amahora (noma ngaphezulu).
Ukuze abasebenzi izitshalo chemical ezisohlwini umthetho, it ingafakwa ngesonto angu-36-24.
Isikhathi esincane kuyodingeka ukusebenza futhi abesifazane abakhulelwe eNyakatho Ekude.
Ngakho, akekho ukusebenza amahora angaphezu kuka-40, kungakhathaliseki oda izinsuku ezinhlanu noma wezinsuku eziyisithupha ngesonto inikezwe ibhizinisi.
Five- futhi wezinsuku eziyisithupha ngesonto
Isikhathi usuku ngalunye kunqunywa ngokuyinhloko imithetho yangaphakathi inkampani ethile. Yiqiniso, umthetho olawula le nkinga. Ngokwe iziqondiso ngezinsuku zeviki eRussia - kungcono izinsuku ezinhlanu kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu kukonke. Nokho, isimo sokuthunjwa ubhekwa esibophezelayo kuzo zonke izimo. Ngokomthetho, umqashi, ngokusekelwe izici zokukhiqiza, kanye Ungasetha ngesonto wezinsuku eziyisithupha. Ngenxa yalokho, abanye abasebenzi izinkampani ukusebenza owengeziwe langoMgqibelo noma langeSonto. Nokho, inani lomthetho esiphezulu amahora ngesonto siyenzeka kunoma isiphi isimo.
Yini njengokusoka isikhathi ukusebenza
Yiqiniso, umthetho olawula le nkinga. Ukusebenza isikhathi - amahora, phakathi kwesikhathi lapho umsebenzi ngaphansi kwenkontileka umsebenzi ziyakuyikhonza. Le modi - omunye izimo ebalulekile le dokhumenti, okungase kwenziwe kuphela ngesisekelo namazinga RF LC. Ngokusekelwe lokhu, kungenzeka ukuhlonza zonke izinsuku ukusebenza ngonyaka. Bangaki-ke kubo kuzoncika, Ngakho-ke, ngaphansi kwemibandela yesivumelwano umsebenzi, amazinga RF TC kanye nemithetho kahulumeni.
Umthetho usebenza isikhathi lubalwa njengonyaka inani lamaphuzu.
Breaks esichithwa Ukushisa emakhazeni (for labo sebenza ngaphandle).
Ukuze abesifazane nezingane - isikhathi esichithwa yokudla.
sekhefu (uma kwenzeka ukuthi umuntu abakwazi ukushiya yakho yomsebenzi).
Ngakho, siye basabela umbuzo oyinhloko isihloko: "? Ukusebenza izinsuku ngonyaka - bangaki kubo, futhi uwuchaza kanjani" Ngo-2014 lapho kuyoba 247. Ngesonto akekho okufanele isebenze amahora angaphezu kwangu-40, kungakhathaliseki ukuthi izinsuku ezinhlanu noma shestidnevka kanye namahora okusebenza - umqondo, inkontileka umsebenzi ezilungisiwe iyawakha ngenhloso Ikhodi zabasebenzi. Ngokuqondene namaholide, uHulumeni okuthwala nabo okukhipha ifaniswe kunoma iyiphi usuku nonyaka uma bebona kunesidingo.
Lobar, ngokuhlanganyela futhi isibopho ngokuzibona
Ukwephula imithetho yokuphepha: umthwalo, izidingo kanye nezinhlobo
Lost iphasiphothi. Yini angayenza kulesi simo,
Chaza izinhlobo izimo. Ukunciphisa kanye isihluku
Eqeda phansi self-yokululama compounds: amathiphu namasu
Imimoya "Givenchy" abesifazane - isikhali zothando
Slurry: olinganise ekahle ingxube
Ithuluzi esiyinhloko ukhuni ukusebenza: igama, izici isicelo kanye nokubuyekeza
Imikhiqizo kwandise ingcindezi yokufuna
Volkov Valery - iphayona-iqhawe